Qarixii Soobe ka dib "Muqdisho ma niyad jabin" - BBC News Somali
Qarixii Soobe ka dib "Muqdisho ma niyad jabin"
Calinuur Salaad Weriyaha BBC, Muqdisho
Image caption Guryaha burburay qaar ka mid ah ayaa dib loo dhisayaa
Isgoyska Soobe waxaa ka bilowday dayactir lagu sameynayo waddada iyo dhismayaashii ku burburiyay qarixii shan maalmood ka hor ka dhacay halkaas.
Sida ay sheegtay dowladda, waxay doonayaan in la muujiyo in aanan la niyad jebin, dib u dayactirkana waxaa hoggaaminaya maamulka gobolka Banadir.
Gaadiidka waa wayn ee dhismaha ayaa saaka aroortii hore ku dhaqaaqay isgoyska Soobe, waxay dib u dhisayaan wadada uu burburiyay qaraxa.
Dhismaha Soobe ayaa sidoo kale lagu billaabay dayactir. Waxaana la filayaa in ganacsiga uu dib u soo noqdo.
Soobe waxay ka mid ka mid ah suuqyada ugu mashquulka badan Muqdisho, waxaana istaagi jiray qaar ka mid ah gawaarida ka kala timaata gobollada qaar ee dalka.
Guddoomiyaha Gobolka Banaaadir Taabit Cabdi Maxamed ayaan sheegay in waddada uu qaraxa ka dhacay loo bixiyay 14ka Oktobar oo ah maalintii qaraxa uu dhacay.
"Ujeedada waa in meesha la hagaajiyo, la nadiifiyo, sideedii horena lagu soo celiyo ka dibna calaamadihii waddada la soo celiyo," ayuu yiri Gudoomiye Taabit Cabdi.
Qarixii Soobe: Farmaajo oo todobo arrimood u sheegay Soomaalida
Qarixii Muqdisho oo mideeyay Soomaalida
Qarixii Soobe waxaa ku dhintay ugu yaraan 281 qof, 300 oo kalena way ku dhaawacmeen. Sidoo kale waxaa jiro dad weli raadinaya dad ka maqan oo markii dad ugu wardambeysay lagu ogaa nawaaxiga meesha uu qaraxa ka dhacay.
Wuxuu tilmaamay in taallo loogu talagalay dadkii ku dhammaaday qaraxa laga dhisidoono waddada Soobe ee hadda loo bixiyay 14ka Oktobar.
Image caption Isgoyska Soobe oo dib u dhis uu ka bilowday
Dowladda Soomaaliya waxay aaminsan tahay in dib u soo celinta nolsha caadiga ee Muqdisho ay qeyb ka qaadaneyso la dagaallanka Al-shabaab.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ururka Al-Shabaab ku eedeeyay in ay masuul ka ahaayeen weerarkii ugu xumaa ee ka dhacay Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo ayaa dadkii ku dhintay weerarkaas ku tilmaamay mujaahidiin wuxuuna u duceeyay kuwa dhaawaca ah ee isbitaallada ku jira.
Duqa magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dib u soo celinta nolosha caadiga ah ay tahay "adkeysi iyo in aan la niyad jabin, iyo in rajo ay ku jirto."
"Waxay jawaab u tahay in aysan hakin karin hormarka aad wadno, dhibaato kalena in ay noo geystaan waan ka taxadari doonnaa waana iskaashan doonnaa," ayuu yiri Taabit Cabdi, Gudoomiyaha gobolka Banaadir.
Daarta Soobe waxa ay kamid tahay goobaha caanka ah ee qarax uu burburiyay, waxaa hadda ka socda dayactir.
Mid ka mid ah milkiilayaasha Soobe, Maxamed Cabbdulqaadir ayaa sheegay in qasaara wayn uu gaarsiiyay qaraxa oo burburiyay qeybo ka mid ah dabaqa. Wuxuu tilmaamay in bil gudaheed ay ku dhameyn doonaan howsha dib u dhiska.
Image caption Jidad oo aad u burburay ayaa sidoo kale la dhisayaa
Dhismayaasha sida aadka ah u burburay ayaa lagu wareejiyay gidaaro jiingad ah, Waxaa jiro dad badan oo doonaya in ay dib u billaabaan shaqadooda ka dib qarixii dadka badan ay ku dhinteen.
"Waxaan idiinkugu baaqayaa maanta oo maalin taariikhi ah, oo anagoo ka jawaabayna maalintii madoobeey oo Shabaab shacabkeenu xasuuqeen. In aan dhisano difaaca shacabka oo aan la dagaallanno Shabaab," ayuu tilmaamay Farmaajo oo la hadlay dadkii shalay isu soo baxay.
Image caption Qaraxa ayaa burbur wayn u geystay hareeraha isgoyska
Qoysaska wali raadinaya raqda iyo ruuxda dadkooda